Uyilo lwe-UX kunye ne-SEO: Zingazisebenza njani ezi zinto zimbini zeWebhusayithi kunye kwiNzuzo yakho | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 31, 2019 NgoLwesihlanu, Februwari 1, 2019 UJohn Vuong
Ixesha elingaphezulu, izinto ezilindelwe kwiiwebhusayithi ziye zavela. Olu lindelo lubeka imigangatho yendlela yokwenza ubuchule kumava omsebenzisi ekufuneka enikezwe sisiza.
Ngomnqweno wokukhangela iinjini zokubonelela ngezona ziphumo zibalulekileyo nezonelisayo kuphando, ezinye zezinto zibekiwe zithathelwa ingqalelo. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kule mihla ngamava omsebenzisi (kunye nezinto ezahlukeneyo zesiza ezinegalelo kuyo.). Kungathathwa ke ukuba i-UX yinto ebalulekileyo yokusebenza kweinjini yokukhangela.
Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyila i-UX yakho ngobuchule. Ngokukwazi ukubonelela nge-UX encomekayo, uyaqhubeka nokunyusa i-SEO yendawo yakho.
Ezi zilandelayo ziindlela zokwenza ngcono indlela uyilo lwe-UX enokusetyenziselwa ngayo ukuphucula le ndawo yamanyathelo akho e-SEO:
Ukujongana noLwakhiwo loLwazi kwiSiza sakho
Enye yezona imiba ebalulekileyo yoyilo lwe-UX lubekwa njani ulwazi lwakho. Kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba indawo yakho kufuneka ibe nolwakhiwo lolwazi olusebenzisekayo ukuze kuqinisekiswe ukuba abasebenzisi bakho bazokwazi ukufeza iinjongo zabo kwindawo yakho. Injongo kukuqinisekisa ukuba apho uya kuba nakho ukubonelela ngobume besiza ngokubanzi esilula kunye nenomdla, ukuvumela abasebenzisi ukuba bandise ukusetyenziswa kwendawo yakho ngenjongo yabo.
Idesktop ka-Apple kunye nokuJongwa kweMfono
Ukulungisa ukuKhangela kwiWebhusayithi
Enye into yoyilo ye-UX ekufuneka uyiqwalasele kukuhamba kwakho kwindawo yakho. Ngelixa umbono olula wokuba nesikim sokuhamba esenza ukuba abasebenzisi bahambe kakuhle kwiindawo ezahlukeneyo zesiza sakho, ayizizo zonke iisayithi ezinokukufezekisa oko. Kuya kufuneka usebenze ngokuza neskimu esisebenza ngokujolisa ekunikezeleni ngendlela elula yokujikeleza indawo yakho.
Kungcono ulwakhiwo lwesikim sokuhamba kwindawo yakho kulawulo oluphezulu.
Inqanaba lokuqala lolawulo lwakho kukuhamba kwakho okuphambili okunamaphepha ngokubanzi kwindawo yakho. Olona hambo lwakho luphambili kufuneka luqulathe iminikelo yeshishini lakho, kunye namanye amaphepha aphambili ekufuneka indawo yakho iqulethe iphepha elinje ngathi.
Ukuhamba kwenqanaba lesibini kukuhamba kwakho okusetyenziswayo okwakubaluleke kakhulu kumaphepha esiza sakho, kodwa mhlawumbi kungabalulekanga njengalezo ziya kubekwa kuhambo oluphambili. Oku kunokubandakanya iphepha lokunxibelelana nathi, kunye namanye amaphepha esibini endawo yakho.
Unokwamkela amanqanaba amaninzi, okanye ukuhamba nge-mega apho imenyu yakho inokukhokelela kwiimenyu ezingaphantsi. Oku kuluncedo kakhulu ekuvumela abasebenzisi bakho ukuba bembe nzulu kwindawo yakho ngqo kwimivalo yakho yokuhambisa. Olu lukhetho lokuhamba kumashishini aneemveliso ezininzi okanye iinkonzo ezinokuthi zidityaniswe ngokwendidi ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, umceli mngeni wale kukuqinisekisa ukuba imenyu yemenyu yakho iya kusebenza ngokuchanekileyo njengoko kukho ezinye iisayithi ezinemenyu yokuwa kwemenyu ngaphambi kokuba ufike kwiphepha elifunayo.
Kwakhona, umbono kukuqinisekisa ukuba uya kuba nakho ukubonelela abasebenzisi bakho ngesantya esikhawulezayo sokuhamba kwindawo yakho. Umceli mngeni kukuyila a Iskimu sokujonga ujolise kumsebenzisi inganakho ukufezekisa oko.
Sebenza ekuphuculeni isantya seWebhusayithi yakho
Indawo elandelayo echaphazela amava omntu sisantya sewebhusayithi yakho. Kubalulekile ukuba indawo yakho ikwazi ukulayisha ngokukhawuleza, okanye unokubeka emngciphekweni ilahleko enkulu.
Ukuba indawo yakho iyasilela ukulayisha ngaphakathi kwemizuzwana emi-3, amaxabiso akho okuhla ngokuqinisekileyo aya kudlula eluphahleni. Kodwa ayisiyiyo kuphela ukuba iphepha lakho linikezele ngokukhawuleza, kodwa kuya kufuneka ubenakho ukuvumela abasebenzisi bakho ukuba batshintshele kwamanye amaphepha kakuhle.
Ukuze ukwazi ukufezekisa oku, indawo yakho kufuneka iqale iqinisekise ukuba indawo yakho isebenza kwiziseko ezisebenzayo. Iiseva zakho okanye inkonzo yokubamba oyifumeneyo kufuneka ikwazi ukuxhasa indawo yakho kunye nenani labasebenzisi abaya kuyityelela, baqinisekise ukulayishwa okukhawulezayo kwabo bonke.
Elinye inyathelo kukuqinisekisa ukuba indawo yakho ilula, ikhululekile kwiifayile zemithombo yeendaba ezinzima ezinokubangela uxinzelelo kwindawo yakho. Ngumbono olungileyo ukuba neefayile zemithombo yeendaba ezahlukileyo, kodwa ezi kufuneka zigcinwe ubuncinci, kwaye kuphela xa kufanelekile.
Uyilo lwe-UX kufuneka lube luTshintsho-oluFanelekileyo
Uyilo olucwangcisiweyo lwangoku umzekeliso we vector womfanekiso wokukhula kokuguqulwa kwetrafikhi, ukwenziwa kweinjini yokukhangela kwiphepha lewebhu, uhlalutyo lwewebhu kunye nophuhliso lomxholo. Ikwahlukileyo kwimvelaphi yembala yesitayile
Ukuqinisekisa ukuba uyilo lwe-UX yendawo yakho luya kuzisa imbuyekezo, kuya kufuneka uyenze ngobugcisa ngokuguqula engqondweni. Oku kubandakanya ukusetyenziswa kweefowuni ezinamandla zokuthatha amanyathelo, kunye nezinye iindlela zokwenza inguquko.
Kodwa qiniseka ukuba nokuba ubeka umzamo omkhulu ekukhuthazeni uguquko, awudluli ebhodini kwaye uvakala ngathi uthengisa nzima kwindawo yakho yonke. Indawo yakho kufuneka ibe, nangaphezulu kwayo nayiphi na into, egxile kumsebenzisi. Konke malunga nokusebenza kwendawo yakho ukuze ubonelele ngamava omsebenzisi amahle. Ngelixa usenza oko, ungadibanisa amaqhinga axhasayo anokutyhalela phambili uguquko.
Ukuthatha ithuba lokuHamba kunye nokuPhendula
Okokugqibela, kuya kufuneka ujolise ekubalulekeni kokuhamba kunye nokuphendula- izinto ezimbini eziziswa kukwanda kwee-smartphones kunye nokunyuka kwesiphumo sokhangelo kunye nokusetyenziswa kwesiza kwizixhobo eziphathwayo.
Indawo yakho kufuneka ikwazi ukubonelela ngenqanaba elifanayo lamava asemgangathweni kubasebenzisi abahambahambayo xa kuthelekiswa neendlela zesiko zewebhusayithi. Unoko engqondweni, kungcono ukuyila indawo yakho ukuba iphendule xa ifumaneka kwizixhobo eziphathwayo. Ngaphandle kokuba yinto yamava omsebenzisi, impendulo ephathekayo yinto ephambili yokubeka ngokwaso, ngakumbi ukuba iinjini zokukhangela zijonge ngakumbi kwiiwebhusayithi ezihambayo ngoku.
Kungcono ukwamkela uyilo lwewebhu oluphendulayo, oluvumela indawo yakho ukuba izilungelelanise nayo nayiphi na isixhobo ngaphandle kwesidingo sokuza neenguqulelo ezininzi zesiza sakho.
Ukunyusa i-UX ye-SEO ephuculweyo
Ukuqala ngamava omsebenzisi kwenye ezona ndlela zilungileyo zokwandisa iwebhusayithi yakho kwi2019 Inqaku elingenakuphikiswa elibalulekileyo, kulungile ukuba usebenze ekuphuculeni. Zininzi izinto ezichaphazelekayo, kwaye ezinye zezona zibalulekileyo zidweliswe apha ngasentla. Ubuncinci sebenza kwezi ndawo zintlanu, kwaye uya kuba kwindlela elungileyo ekuqinisekiseni ukuba indawo yakho iya kuba namathuba angcono okufumana indawo engcono kwiziphumo zokukhangela.
tags: yendawo seoUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiuphando lwezinto eziphilayoukuphendulauyilo lwe-ux
UJohn Vuong ungumnini yedwa we-Local SEO Search Inc,. Umsebenzi kaJohn kukunceda abanini bamashishini basekuhlaleni ukuba baphucule ifuthe labo kwi-Intanethi ukuze bakwazi ukulawula ishishini labo. Ngobuchule beshishini lakhe kunye nokuqonda okungaphakathi kubume beshishini lendawo, uJohn ubhala iibhlog ezichaza indlela yokwenza imikhankaso ye-SEO ngokusekwe kwiimfuno zabaxhasi.
Indlela yokukhawulezisa indawo yakho yeWordPress